Le Ndlu ikhethekileyo yaseBeachfront ibekwe NGOKUNQO elunxwemeni kwi-Bang Son Bay enoxolo nethe cwaka, inendawo yabantu aba-5 kwaye ingaphantsi kweyure kunye nexesha lokuhamba ngenqwelomoya kude nesixeko esikhulu saseBangkok. Indawo egqibeleleyo yokuntywila emanzini kunye nokuntywila. Siyakwamkela ukuba ube namava eNouna Beach enikezela ngamava okugqibela obumfihlo kunye nobudlelwane obusondeleyo.
Indawo yethu yokuhlala ikwabonelela ngeebungalows(bona imifanekiso) kunye nendlu engaselwandle yeendwendwe zethu.
Nabani na kwaye wonke umntu wamkelekile.
Uphakathi kweentlobo ngeentlobo zemithi, iintaba kunye nonxweme ukuze ujabulele ukuthula kunye nokuzola.
Ibekwe ngokugqibeleleyo kumgama osondeleyo kwisikhululo seenqwelomoya kunye nelali elandelayo.
Ke ukuba uziva uthanda ukuya kwigalufa, ukusefa kwiKite, ukuntywila, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela ibhayisekile nokunye okuninzi, unayo indawo egqibeleleyo kunye nesiqalo sokufikelela kuyo yonke indawo ekufutshane.
Mhlawumbi ufuna ukufumanisa iziqithi zetropikhi kwigalufa yaseThailand phambi kwakho okanye ufuna nje ukuhlala ubusuku ukuze utshintshele kwesinye seziqithi ezikwigalufa yaseThailand (njengeKoh Thao, Kho Pangan, Koh Samui). ..
Nantsi ngokwenene ... isiseko esifanelekileyo seholide yakho!
Ukuba uyithanda ngokwenyani indalo, ukuzola kunye nendawo yabucala kakhulu kunye nesondeleleneyo kude nokhenketho oluninzi, olu inokuba lolona khetho lufanelekileyo lokuba uphumle kwaye ube namava ezilwanyana zasendle, ilanga elitshisayo kunye nolwandle olucocekileyo olunombono omangalisayo phezu kwe-bay, kunye iintaba ngasekunene kwakho.
Ubona iziqithi ezininzi ezingaphambili, ezinokutyelelwa ukuntywila kunye nokuntywila.
Phakathi kweentlobo ngeentlobo zemithi yasekhaya efana nekhokhonathi, isundu, ioyile, imithi yeziqhamo kunye nonxweme olunesanti, yindawo yakho yokutshisa ilanga.
Kwimida yale ndawo inkulu enobungakanani obumalunga ne-16.000 yeemitha zesikwere, unendawo yasendle, efana nehlathi apho unokubukela khona iintaka zetropikhi kunye neenkawu kunye nezityalo ezingaqhelekanga.
Kukho iivenkile ezininzi kunye neeresityu kumgama ohambahambayo, ukusuka kwintengiso ephantsi ukuya kodidi oluphezulu.
Ukuba uthanda ukutya kwaselwandle okutsha singacebisa iindawo zokutyela ezinkulu ezikufutshane. Okanye usenokugqiba kwelokuba ube nesonka esincinci okanye isidlo apha nathi.
Nangona kunjalo, ukuba uyathanda ukuya kuthenga kwilali ethandekayo iPathiu (malunga nomgama oziikhilomitha ezi-5) uya kuba nezibonelelo ezininzi zokukunceda.
Ilali ine-2 x 7 elineshumi elinanye, iTesco Lotus (ivulwe iiyure ezingama-24) izitishi zegesi ezi-2, iposi kunye nemarike entsha yemihla ngemihla apho unokuthenga iziqhamo, imifuno kunye nokunye okuninzi ukuba uyathanda.
Umtsalane omkhulu kunye namava, ngakumbi abantu basemzini, yimarike yeveki yaseThai eqhelekileyo, evulwa rhoqo ngoLwesine kwaye ibekwe kwisikhululo sikaloliwe esibonelela ngezinto ezahlukeneyo ezifana nezihlangu, iimpahla, iziqhamo, ukutya kwasekhaya kunye nokunye.
IINGCEBISO EZIKHETHEKILEYO KWIINDLEKO:
Ukuba uqubha ebusuku kolu lwandle, unokufumana amava amnandi ngamanzi abengezelayo (bioluminescence).
Amanzi anombala oluhlaza obumenyezelayo xa uhambisa izandla zakho emanzini.
Amanye amava amnandi ekufuneka ekhankanyiwe asenokuba zizigidi zeefinyi ezikujikelezileyo (kuxhomekeke kwixesha lonyaka) okanye ukhenketho ngesikhephe ebusuku kumlambo omncinci emva kwendawo yethu.
Ukongeza iphondo laseChumphon linazo ezi zinto zilandelayo zinomtsalane (phakathi kwezinye):
I-DINING kunye ne-SORKELING iindawo ezikufutshane kunye ne-coral reefs, intlanzi, i-squid, bona iinkumba njl.njl.
IINGQIPHU ezintle phakathi kwehlathi,
I-CAVES (ukuba ufumanisa enye ungayibhalisa kwaye uyinike igama !!!)
IINTABA zokukhwela, ukubukela, UKUBUKELA IINTAKA
IIPARKI ZIKAZWELONKE ezineTROPICAL WILDLIFE
IZIMBALI zikujikeleze emhlabeni okanye kumlambo omncinane osemva kwakho
AMANZI AMANZI AMANZI,
IITEMPELELO neendawo zembali
Kwaye OKUNYE KAKHULU!
Siyavuya ukuphendula imibuzo yakho nanini na kwaye naphi na apho sinakho. Singakunceda kwaye sikuncede ukuze ufumane le nto uyifunayo.
Ukuba ufumana naziphi na iingxaki zonxibelelwano ngolwimi lwesiThai/IsiNgesi singakwazi ukukunceda. Sifowunele nje ukuba kuyimfuneko.
Kwimeko apho unokuba nengxaki ngomzekelo. uqhagamshelo lwe-intanethi, izibane, i-air conditioner njl njl. Nceda ubuyele kuthi ngqo. Izinto ezininzi zinokusonjululwa ngomnwe!
Inombolo yethu yefowuni ibonakala emva kokubhuka ngoko ke nceda ungathandabuzi ukusitsalela umnxeba kwaye siyavuya ukukukhonza.
Ukuba ufumana naziphi na iingxaki zonxib…